Tantara · Aogositra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Tantara · Aogositra, 2017
Tantara mikasika ny Tantara tamin'ny Aogositra, 2017
Blaogy Sy Mafalda: Ny Tantaran'ny Takela-pahatsiarovana Iray
Inona no sakana tsy hanaovana zavatra tsotra sy mahafinaritra tahaka izany ho an'ireo vahoaka vaventy sy madinika?
Ejipta22 Aogositra 2017
Syria: Fitiavana ao Stuttgart
Alemaina14 Aogositra 2017
Adinoy ny politika, i Obama sy ny krizy ara-toekarena. Momba ny fitiavana indray izao ny resabe vaovao ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Syriana .
Mpanao Politika Japoney Manery ny Talen-tsekoly Amin'ny Boky Fianarana Tantara Manazava ny ‘Vehivavy Fiononana’
Tamin'ny Zoma 4 Aogositra 2017, nanjaka tao amin'ny Twitter Japoney ny lohahevitra momba ny boky fianarana tantara. Nalaza vetivety tao amin'ny Twitter ny andian-teny hoe "nahoana no nosafidiana ity boky ity"(教科書なぜ採択)